Maqal – Page 2 – Akhbaarta Wanaagsan
Markhatifur / Somali Christian Testimonies 2017
Somali Christian Testimonies 2017 Q2: Shiino Gabo
Maanta waxaan haynaa marqaati furkii cusub ee Shiino, dhamaan walalah Masixiyiinta ah, waxaan idinka codsanyaa in aad la wadagtaan dadka aan maqlin, Akbaarta wanaagsan, ee Sayid Ciise Masiixi. Rabiga haidin …
Markhatifur / Muuqaal / Somali Christian Testimonies 2017
Somali Christian Testimonies 2017 Q1: Yusuf Shirane
Halkan dhegeyso Halkan daawo:
Maqal / Muuqaal
Ayadaha maalintan waaxaad ku helikartaa YOOXANAA 15 halkan ku dhegeyso: Cutubka 15 aayada 9-17: 9Siduu Aabbuhu ii jeclaaday, ayaan anna idiin jeclaaday. Jacaylkayga ku sii jira. 10Haddaad qaynuunnadayda xajisaan, …
All resources / Maqal / Qoraal
Yaa jacaylka Masiixa inaga sooci doona?
Rooma 8 halkan dhegeyso: Rooma 8:33-39 halkan aqriso: Yaa ashtakayn doona kuwa Ilaah doortay? Waa Ilaah kan wax xaq ka dhigaa. Waa ayo kan wax xukumi doonaa? Waa Ciise Masiix …